Imicimbi ezayo - Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
I-Oyoun	Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin
Ukubhadula, ukubhadula phakathi kwemisonto elukiweyo exineneyo. Ubomi buqhubeka ngolu hlobo: ekubhaduleni rhoqo, ekufuneni rhoqo intsingiselo, kwiindlela ezingapheliyo, ezitalatweni nasezindleleni, kwiindlela ezinkulu kunye neendlela ezihamba ngeendlela - i-labyrinthine kwi-infinity yabo, ekumemeni kwabo kwi-wanderer: nantsi enye ikona ekhangayo, ngokulambisa. iinyawo ezibonakalayo [...] emhlabeni, imikhondo yeentshukumo ezithe cwaka [...]
NgoJuni 29, 09:00 - 18: 00	 Ukuqeshwa kothotho
Ukulinda kuphelile ekugqibeleni! Umsitho waminyaka le wabahlali baseDas Nettz uya kubanjwa nge-29 kaJuni nowama-30, 2022 - ekugqibeleni uphile kwaye ube nemibala kwakhona! Njengesiqhelo, iindwendwe ezininzi ezintle, izihloko ezinomdla, iifomathi ezisebenzisanayo kunye ne-NETTZworking eninzi ikulindele. Ukusuka kwi-AI ukuya kubuhlanga, ukomelela, uphando, idemokhrasi ukuya kwi-disinformation - [...]
NgoJuni 30, 09:00 - 18: 00	 Ukuqeshwa kothotho
Iphupha uMiyake-Mugler ukumema ukuba ubhiyozele usuku lwabo lokuzalwa. Kodwa nangakumbi ukubhiyozela inkuthazo yabo enkulu ye-ballroom, abazali, imizekelo kunye neempembelelo. Iindidi ziya kuphefumlelwa ngabo - ukubanika imbeko kwaye babanike iintyatyambo zabo. 🌹❤️ Ukusuka kwi-Creamy ukuya kwi-Steamy ukuya kwi-Dreamy - uyazi ukuba iya kuba ngumsindo! Abathathi-nxaxheba: 10 € [...]
Isandla kwi-trowel kunye nasentliziyweni: I-Ping Pong okanye intenetya yetafile ngumdlalo ongaqhelekanga-uvuleleke phantse kuye wonke umntu, awunxibelelani kwaye uyonwabisa kakhulu kwabaqalayo kunye nabanobuchule ngokufanayo. Yiyo loo nto iitafile ezine zetafile zentenetya ziya kusekwa kwitumente ye-queer ping pong ngoMgqibelo - thina, kuwe, kuluntu. Yonke into entle [...]
Sele enee-mixtapes zakhe zokuqala kunye nee-EPs, wakwazi ukufumana ingxelo entle kakhulu, ukuze kungekudala imfazwe yokubhida phakathi kweelebhile ezinkulu iqale, leyo i-Universal yaphumelela. Ukusukela ngoko, wazinikela emculweni kwaye ngexeshana nje elifutshane waphuhlisa indawo yakhe yokuthengisa, ezinzileyo, ethe yakhawuleza yafumana imvume enkulu kwindawo yerap elawulwa ngamadoda. [...]
Thumela ifayile ye-Outlook .ics